China breeki akpụkpọ ụkwụ na-enweghị mkpọtụ, ọ dịghị vibration factory na suppliers | SANTA
Na-elekwasị anya na breeki mpe mpe akwa na akpụkpọ ụkwụ, dabere n'ịdị mma
Aha ngwaahịa Akpụkpọ ụkwụ breeki dị ala
Aha ndị ọzọ Akpụkpọ ụkwụ breeki ọla
Ihe onwunwe Ụdị ọla dị ala
Mpekere breeki&akpụkpọ ụkwụ breeki
Ọ bụ ezie na breeki na akpụkpọ ụkwụ breeki na-arụ ọrụ yiri nke ahụ, ha abụghị otu ihe.
Ihe mgbochi breeki bụ akụkụ nke sistemu breeki diski. N'ime usoro ndị dị otú ahụ, caliper na-ejikọta pad breeki ọnụ na diski rotor - ya mere aha ya bụ "breek diski." Ihe mpempe akwụkwọ na-amanye na rotor na-emepụta esemokwu dị mkpa iji kwụsị ụgbọ ala.
Akpụkpọ ụkwụ breeki bụ akụkụ nke sistemu breeki drum. Akpụkpọ ụkwụ breeki bụ ihe ndị nwere ihe mgbakasị ahụ dị n'otu akụkụ. Ha na-anọdụ n'ime brek drum. Mgbe a na-agbanye pedal breeki, a na-amanye akpụkpọ ụkwụ breeki ahụ n'èzí, na-agbanye n'ime ime nke breeki ahụ ma na-ebelata wheel ahụ.
Ịgba breeki na akpụkpọ ụkwụ breeki bụ akụkụ nke usoro breeki nke ochie ma bụrụ nke a na-ahụkarị na ụgbọ ala ọgbara ọhụrụ. Agbanyeghị, ụfọdụ ụdị ụgbọ ala ga-enwe breeki drum na azụ azụ ebe ọ bụ na brek drum dị ọnụ ala karịa imepụta.
Achọrọ m paịlị breeki ma ọ bụ akpụkpọ ụkwụ breeki?
Ọ bụ ezie na ị nweghị ike ịgwakọta na dakọtara na otu wiil - dịka ọmụmaatụ iji breeki na breeki drum ma ọ bụ akpụkpọ ụkwụ breeki nwere diski diski - ọ ga-ekwe omume ịnwe ma breeki na akpụkpọ ụkwụ n'otu ụgbọ ala. N'ezie, ọtụtụ ụgbọ ala na-eji nchikota nke abụọ, na-abụkarị obere ụgbọ ala, na sistemụ breeki diski dabara na axle n'ihu na usoro breeki drum dabara na azụ axle.
Nke gara aga: Ịgba breeki maka ụgbọ ala ndị njem
Osote: Ihe mgbochi seramiiki, na-adịte aka na enweghị mkpọtụ
akpụkpọ ụkwụ breeki akpaaka
ụgbọ ala akpụkpọ ụkwụ breeki
breeki akpụkpọ ụkwụ hyundai
akpụkpọ ụkwụ breeki ụgbọ ala
drum breeki akpụkpọ ụkwụ
hino breeki akpụkpọ ụkwụ
akpụkpọ ụkwụ breeki honda
toyota hiace breeki akpụkpọ ụkwụ
akpụkpọ ụkwụ breeki ụgbọala na-adọkpụ
akpụkpọ ụkwụ breeki gwongworo
Ngwaahịa na-ekpo ọkụ - map saịtị mpe mpe akwa breeki akpaaka, Ụgbọ ala breeki, diski breeki, breeki drum volvo, Ụgbọala akpụkpọ ụkwụ breeki, Pads breeki na-arụ ọrụ,